CARNAVAL DE MADAGASCAR : Mampiroborobo ny fizahantany | déliremadagascar
CARNAVAL DE MADAGASCAR : Mampiroborobo ny fizahantany
Ny sabotsy 16 sy ny alahady 17 jona ny hetsika ara-koltoraly “carnaval de Madagascar”. Niova ny toerana tamin’ity andiany faha-efatra ity. Eo anoloan’ny kianja ben’ny Mahamasina no hanatanterahina ny hetsika mandritra ny roa andro. Isaky ny atoandro amin’ny 12 ora ka hatramin’ny roa ora dia hisy ny diabe ho ataon’ireo fikambanana hampahafantatra ny kolontsaina mampiavaka ny faritra 22. Ny ofisim-paritry ny fizahan-tany Analamanga (ORTANA) no mikarakara ny hetsika. Trano heva 50 hampiranty ny toerana azo tsidihana eto amin’ny faritra Analamanga. Hisy ihanykoa ireo trano heva natokana ho an’ny faritra hafa. Amin’ny alalan’ny voandalana mampalaza ny toerana iray no hampahafantarana ireo toerana azo tsidihina, hoy ny talen’ny ORTANA, Harimisa Razafinavalona. Araka ny fanazavany hatrany dia tanjon’ny “carnaval de Madagascar” ny hampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara.
Mpiara-miombona antoka amin’ny fikarakarana ny “carnaval de Madagascar” ny Mada Vision sy Be Mozik. Ankoatra ny tsenaben’ny faritra, hanao fampisehoana maimaim-poana ny tarika Mage 4 ny sabotsy 16 jona. Anjaran’ny tarika Samoela kosa ny alahady 17 jona 2018.
Kandida Serge Jovial Imbeh : 80 % ny vin...
ANTOKO MDM : Mifameno ny fifidianana sy...
ANTOKO AVANA : Kandida tokana tohanany i...
Kandidà Rajaonarimampianina: “Ny Asa...
KANDIDA RADILOFE MAMY RICHARD : Laharam-...
OPENFLEX: Rindram-baikom-pitantanana ori...
NY RADO RAFALIMANANA : Hanampy ny tanora...
Eric Guanomad: Hikôtikôty vehivavy 19 août 2018
Kandida Serge Jovial Imbeh : 80 % ny vinam-piarahamonina efa vita fifanarahana 18 août 2018
ANTOKO MDM : Mifameno ny fifidianana sy ny fanorenana ifotony 18 août 2018
ANTOKO AVANA : Kandida tokana tohanany i Andry Rajoelina 17 août 2018
Kandidà Rajaonarimampianina: “Ny Asa vita no ifandrefesana” 17 août 2018
Coups bas … 17 août 2018
DHD :Tsy mahatoky ny CENI 17 août 2018
william dans AFFAIRE PEDOPHILIE DE MITSIO : Roland Vilella nous répond de Paris